မော်တော်ယာဉ်များ - Katio
နေအိမ်> စက်မှုလုပ်ငန်းများ> မော်တော်ကား
မော်တော်ကားလုပ်ငန်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်မှု၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဟိုက်ဘရစ် / လျှပ်စစ်ယာဉ်များစသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးနေသောကြောင့်သွက်လက်သောမော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီများသည် Protolabs သို့ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ စျေးကွက်သို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာကြသည်။ လျင်မြန်သောအလှည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှု နှင့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်နိုင်သောတုံ့ပြန်ချက် ဒီဇိုင်နာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများသည်ပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည် ၀ ယ်လိုအားကိုပိုမိုတုန့်ပြန်ရန်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိသောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုတည်ဆောက်စဉ်ဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာများသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျော့ပါးစေသည်။
အလိုအလျောက်ကိုးကားခြင်း၊ မြန်ဆန်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်အသံအနိမ့်အမြင့်ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများမှလိုင်းဆင်းအရေးပေါ်အခြေအနေများ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများသို့မဟုတ်အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အနှောင့်အယှက်များအတွက်လိုအပ်ချက်အတွက်အကူအညီကိုရယူပါ။
Steering column control modules now integrate an expanding variety of functions into the steering wheel, offering driversahost of functions for both safety and convenience. Providing connectivity between all of those helpful buttons and switches and the functions they control—from the turn signals and wipers to cruise control and even heating the steering wheel itself—is the job of the clock spring,aplastic disc about the size ofahockey puck that sits hidden under the steering wheel within the steering column control module. See how digital manufacturing helped reduce product development time for global tech companies ကျွန်ုပ်တို့ကို Kaito Mold.
Thermoplastics ။ PEEK၊ acetal အပါအ ၀ င်ရာပေါင်းများစွာသော thermoplastics မှရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုထောက်ပံ့ပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောစီမံကိန်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်အရောင်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။
နိုင်လွန် ရွေးချယ်ထားသောလေဆာနှင့် Multi Jet Fusion မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောနိုင်လွန်ပစ္စည်းများအများအပြားတွင် 3D ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံများ။ ဓာတ်သတ္တုနှင့်ဖန်ထည်နိုင်လွန်များသည်လိုအပ်သည့်အခါစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်စေသည်။
အရည်ဆီလီကွန်ရော်ဘာ။ ဆီလီကွန်ရာဘာကဲ့သို့သောလောင်စာဆီခံနိုင်ရည်ရှိ fluorosilicone ကို gaskets, seals and tubing များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မှန်ဘီလူးနှင့်အလင်းရောင်အသုံးပြုသောပလတ်စတစ်မှန်ဘီလူးများကိုလည်းရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
လူမီနီယမ်။ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်အတွက်အသုံးပြုသောဤရည်မှန်းချက်ရှိသောသတ္တုသည်အစွမ်းထက်မှုနှင့်အချိုးအစားကိုကောင်းမွန်သည်။ စက်ဖြင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် 3D ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
Prev: ပုံ Consumer Electronics
နောက်တစ်ခု - စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာ